दाँतमा किरा लागेर हैरान हुनु भएकाे छ भने, दाँतको किरा मार्ने अचुक घरेलु उपाय - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it दुधलाई कुन समयमा पिउदा फाइदा हुन्छ, यसलाई कसरी पिउने ?
Up Next पालक पनिर घरमा बनाउँन के गर्ने ? के के कुरा चाहिन्छ ? सम्पुर्ण जानकारी सहित
जाडो सुरु हुने बित्तिकै धेरै मानिसहरू चिसो र रुगाखाेकिबाट ग्रस्त हुन थाल्छन् । यद्यपि यो एक धेरै साधारण रोग हो,…
राति सुत्नुअघि यस्ता कार्य गर्दा स्वास्थ्यमा यति ठूलाे फइदा, पढाैँ र सुरू गराैँ
प्राकृतिक चिकित्सा के हो ? यस्ता छन् उपयोगी प्राकृतिक चिकित्सा विधी
‘रोगमुक्त रहनु नै उपचार गर्नुभन्दा बढी उत्तम हो ।’ कुनै औषधीको प्रयोग नगरी, शल्यक्रिया नगरी, सुई नखोपी गरिने उपचार विधी…
के तपाइकाे आँखा कमजाेर छ ? छ भने यस्ता खानेकुरा खानुस्
आजकल मानिसहरू जतिखेर पनि स्मार्टफोनमा झुण्डिरहने भएकाले आँखामा खराब असर परिरहेको हुन्छ । बच्चाहरू पनि आँखा कमजोर भएर चश्मा लगाउन…